Japan oo lagu wado in doorasho baarlamaani ah ay beri ka dhacdo. – Idil News
Japan oo lagu wado in doorasho baarlamaani ah ay beri ka dhacdo.
Posted By: Jibril Qoobey October 30, 2021
Cod-bixiyayaasha Japan ayaa u dareeri doona goobaha codbixinta maalinta Axadda iyadoo xisbiga Ra’iisul Wasaaraha Fumio Kishida uu u halgamayo sidii uu u badbaadin lahaa aqlabiyadda aqalka hoose, iyadoo ay ka careysan yihiin sida ay wax uga qabteen cudurka faafa ee coronavirus iyo sidoo kale ka sii darayaan sinnaan la’aanta dhaqaale.
Kahor inta aan la kala dirin baarlamaanka si loogu codeeyo Axadda, xisbiga talada haya ee Liberal Democratic Party (LDP) wuxuu lahaa 276 kursi oo ka kooban 465 xubnood, halka saaxiibkiisa isbahaysiga Komeito uu haysto 29. Inta badan codadka ayaa mar kale saadaaliyay in LDP ay ku guuleysan doonto aqlabiyadda, inkastoo tirada kuraasta la dhimay, Kishida oo xafiiska la wareegay horaantii bishaan – ayaa sheegay Isniintii in xisbigu uu wajahayo xaalad “aad u adag” oo ku saabsan codbixinta soo socota.
Xisbiga talada haya ee Japan LDP ayaa difaacay ka hor codbixinta baarlamaanka Booliska ayaa toogasho ku dilay Biden oo loo magacaabay safiirka Maraykanka ee Japan Buurta Aso ee Japan ayaana qaraxday, dadku waxay uga digeen inay ka fogaadaan Maraakiibta Shiinaha iyo Ruushka, kuwaas oo si wadajir ah uga shiraacday marinka Japan.
Sababtuna waxa ka mid ah in shan xisbi oo mucaarid ahi ay ku midoobeen sidii ay musharraxiin wada jir ah uga soo saari lahaayeen degmooyin tiro badan oo hal xubnood ah.
Midda kale waa in ay jiraan tiro badan oo codbixiyeyaal ah oo aan weli go’aansan – laga yaabee ilaa 40 boqolkiiba. Wakaaladda wararka ee Kyodo, oo ra’yi dhiibtay 119,000 oo xaq u leh inay codeeyaan, ayaa sheegtay Arbacadii in tirada badan ee codbixiyaasha aan go’aansanin ay la macno tahay.
“Natiijadu waxay weli u sii wareegi kartaa labada dhinac”. Wargeyska Asahi Shimbun, oo ra’yi ururiyay 380,000 oo codbixiyeyaal ah, ayaa sidoo kale sheegay inay “Weli suurtagal tahay in mowjaddani ay isu beddesho maalinta codbixinta”.